Andrew Johnson Biography - UMongameli weshumi elinesixhenxe waseMelika
U-Andrew Johnson woBuntwana kunye neMfundo:
Wazalelwa ngoDisemba 29, 1808 eRaleigh, eNorth Carolina. Uyise wakhe wafa xa uJohnson eneminyaka emithathu ubudala kwaye wakhulela ebuhlwempu. Wayekho kunye nomntakwabo uWilliam bebanjwe njengomkhonzi ongenakunyanisekileyo kumntu othe tye. Ngaloo ndlela, bobabini basebenzela ukutya kunye nokulala kwabo. Ngo-1824, bobabili babalekela, bephula isivumelwano sabo. Wasebenza kwintengiso yomthengisi ukwenza imali.
UJohnson akazange abe esikolweni. Kunoko, wazifundisa ukuba afunde.
UJohnson wayengunyana kaYakobi, umgcini we-porter, kunye ne-sexton eRaleigh, North Carolina, noMary "Polly" McDonough. Uyise wakhe wafa xa uAndreya ebesithathu. Emva kokufa kwakhe, uMary watshata noTherer Dougherty. UJohnson wayenomzalwana omnye ogama linguWilliam.
Ngo-Meyi 17, 1827, uJohnson watshata no-Eliza McCardle xa eneminyaka eyi-18 kwaye wayeneminyaka eyi-16. Wamfundisa ukuba amncede aphucule izakhono zokufunda nokubhala. Bonke babenamadodana amathathu kunye neentombi ezimbini.
Umsebenzi ka Andrew Andrewson Ngaphambi koMongameli:
Ngeeshumi elinesixhenxe, uJohsonson wavula eyakhe ivenkile e-Greenville, eTennessee. Ngo-22, uJohnson wakhethwa nguMeya waseGreenville (1830-33). Wasebenza kwiNdlu yaseTennessee yabameli (1835-37, 1839-41). Ngomnyaka we-1841 wanyulwa njengeSenethi yePhondo yaseTennessee. Ukususela ngo-1843-53 wayengummeli wase-US. Ukususela ngo-1853-57 wayekhonza njengeRhuluneli yaseTennessee.
UJohnson wakhethwa ngo-1857 ukuba abe uSenethi wase-US emele iTennessee. Ngowe-1862, uAbraham Lincoln wenza uJohnson iRhuluneli weMpi yaseTennessee.
Xa uMongameli uLincoln wagijimela ukulungiswa kwakhona ngowe-1864, wakhetha uJohnson njengeVice-ngameli wakhe . Oku kwenziwa ngenjongo yokuncedisa ithikithi kunye nomzantsi osemntwini oye wenziwa ukuba yi-pro-Union.
UJohnson waba ngumongameli ekufeni kuka-Abraham Lincoln ngo-Apreli 15, 1865.
Iziganeko kunye neempumelelo zikaMongameli we-Andrew Johnson:
Emva kokuphumelela kumongameli, uMongameli uJohson wazama ukuqhubeka nombono kaLincoln wokwakha kwakhona . ULincoln noJohnson babecinga ukuba kubalulekile ukuba bahlonipheke baze baxolele abo bavela kwi-Union. Isicwangciso sokuvuselela uJohnson sasiya kubavumela abantu baseMzantsi Afrika abafungela isifungo sokuthembela kurhulumente wephondo ukuba abuye aphinde abe ngummi. Oku kunye nokubuyela ngokukhawuleza kwamandla kwilizwe ngokwabo akuzange kunikezwe ithuba kuba uMzantsi akazange afune ukwandisa ilungelo lokuvota kwabamnyama kunye namaRiphabhliki amakhulu afuna ukujezisa uMzantsi.
Xa amaRephabliki eRadical adlulisa uMthetho woLuntu woLuntu ngo-1866, uJohnson wazama ukuvota i-bill. Akazange akholelwe ukuba umntla kufuneka uxinzelele imibono yakhe ngasezantsi kodwa kunoko avume ukuba i-south ikhethe inkqubo yayo. I-veto yakhe kule nkqubo kunye nezinye iindleko ezili-15 zagqitywa. Uninzi lwabantu abamhlophe basemaphandleni bachasana kwakhona.
Ngowe-1867, i-Alaska yathengwa kwizinto ezazibizwa ngokuba ngu "Seward's Folly." I-United States ithenge umhlaba ukusuka eRashiya i-$ 7.2 yezigidi kwiNkokheli kaRhulumente kaWilliam Seward .
Nangona abaninzi bebonile njengento yobuwula ngaleso sikhathi, bekuyi-investment eyamangalisa ngokwenene ukuba yanikela iMelika ngegolide kunye neoli xa ikhulisa ubukhulu be-United States ngokukhawuleza kwaye isusa ummandla waseRashiya kwilizwekazi laseMntla-Amerika.
Ngowe-1868, iNdlu yabaBameli yavotela uMongameli u-Andrew Johnson ngokugxotha uNobhala weMfazwe uStanton ngokumalunga nomyalelo woMthetho wokuSebenza kwe-Ofisi kaMasipala oye waphelelwa ngo-1867. Umongameli wesibini uya kuba nguBill Clinton . Kwi-impeachment, i-Senate iyadingeka ukuba ivote ukuba inqunywe ukuba umongameli kufuneka asuswe esikhundleni. I-Senate ivotelwe ngokususa uJohsonson ngevoti elilodwa kuphela.
Ngo-1868, uJohnson wayengakhethiweyo ukuba asebenze ukuba abe ngumongameli.
Wahlala umhlala-phantsi eGreneville, eTennessee. Wazama ukungena kwiNdlu yase-US kunye neSenate kodwa yalahleka kwiingxelo zombini kwaze kwaba ngo-1875 xa ekhethwe kwi-Senate. Wafa emva nje kokuthatha isikhundla ngoJulayi 31, 1875 yekholera.
I-ofisi kaMongameli uJohannson yayigcwele ingxabano kunye nokuhlukana. Akavumelani nabaninzi kwi-Reconstruction. Njengoko kunokubonwa kwi-impeachment kunye nevoti esondeleyo eyayisichukumisile ngokusuka emsebenzini, akazange ahlonishwe kwaye umbono wakhe wokwakhiwa kabusha wawunganyanzelwanga. Ngexesha lakhe e-ofisi, izilungiso ezilishumi elinesithathu kunye neyeshumi elinesibini zadlulelwa ekukhululeni ama-slave kunye nokwandisa amalungelo kumakhoboka.
I-Raven yeSigaba se-ESL
UJohn Cena - I-Biography ye-WWE ye-Superstar kakhulu
Ikhalenda kaSeptemba yeZenzo eziBalulekileyo kunye neZokuzalwa